Dị ka ndị na-agba osimiri, ndị na-agba ọsọ ụgbọ mmiri na-ejide nkwa nke ịgba ịnyịnya ígwè dị mfe na ịnya ụgbọ ala dị mfe, na-enye ohere ikpuchi ebe dị anya mara mma ngwa ngwa - karịsịa ma ọ bụrụ na ịnwere e-igwe kwụ otu ebe.
N'adịghị ka osimiri ihe ịma mma ha na-abụkarị ọrụ na-akwọ ụgbọ mmiri na usoro ọgụgụ isi na ọdịdị onwe onye nke usoro injinia n'ụzọ, gụnyere ọnụọgụ na-awụ akpata oyi na ọtụtụ njigide na àkwà mmiri.
Somefọdụ dịka Gota kanaal bụ ebe obibi maka anụ ọhịa, ebe ndị ọzọ dịka ọwa mmiri Kiel nke Germany bụ ụdị ngosipụta nke mmadụ mere.
Nke a bụ ebe anyị họọrọ ụzọ iri kachasị mma ụgbọ ala Europe.
Gota Kana, Sweden
A na-amata oghere Göta dị ka 'paịlfọn na-acha anụnụ anụnụ' nke Sweden, site na ime obodo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-enweghị mmiri nke nwere ọtụtụ ọdọ mmiri.
N'oge ọkọchị ọwa mmiri na-adọta ọtụtụ ndị njem, ọtụtụ ndị nọ n'ụgbọ mmiri gụnyere ụfọdụ nnukwu ụgbọ mmiri.
Lebe Karlsborg ebe e wusiri ike ma ọ bụ zuru ike site na ọtụtụ n'ime ọdọ mmiri ndị dị egwu na-aga.
Obodo nke abụọ nke Sweden, Gothenberg na-elegharakarị anya, ma mara mma nke ukwuu, nke nwere okporo ụzọ neoclassical na trams mara mma ma jupụta n'ọdịbendị na ụlọ oriri na ọesụesụ.
Leleekwa akụkụ mmiri ya mara mma.
Bido / mechaa Sjötorp na Gothenberg
Ogologo kilomita 118 / 190km
E-igwe kwụ otu ebe hire Cykelkungen, Gothenberg
Ozi ndị ọzọ Web peeji nke Gota Canal peeji nke West Sweden
-Zọ a kara akara nke ọma, nke gafere otu n'ime ọwa mmiri ndị ama ama na Germany.
Agbanyeghị ọwa mmiri ahụ bụ naanị kilomita iri isii na itoolu / 99km ogologo ụzọ igwe kwụ otu ebe dị mma n'akụkụ (akara aka 'Nord-Ostsee-Kanal-Route') bụ 202 kilomita / 325 km!
Olee otú nke ahụ ga-esi kwe omume? N'ihi na ọ na-achọ ụzọ ya karịa n'ụzọ okirikiri nke ọwa mmiri ma na-enye ọtụtụ vistas ndị ọzọ na-adọrọ mmasị karịa ịrapara na ụzọ ọwara mmiri (ọ bụ ezie na ụzọ mkpirisi dịkwa.
Oke ala nke kanaal ahụ dị oke mma ma ọ ga-anabatakwa ndị na-aga n'oké osimiri.
Kiel n’onwe ya bụ nke kachasị n’oge a n’ihi ịbụ onye atụgburu na WWII, mana na-ejigide ụlọ ụka ochie mara mma na ọdụ ụgbọ mmiri ebe a na-abịa ndụ n’oge izu ụka Kiel - ihe omume ụgbọ mmiri kacha ukwuu n’ụwa a na-eme n’oge izu gara aga nke June, na-ewetara nde ndị ọbịa na ụfọdụ Shipsgbọ mmiri puku anọ ruru n’ofe Germany na mba ofesi.
Bido / mechaa Brunsbüttel ruo Kiel
Ogologo kilomita 202 / 325km
E-igwe kwụ otu ebe hire Wheel 2 Wheel nwere njem a haziri ahazi yana e-anyịnya igwe ndị a na-adabere n'akụkụ ọwa Kiel.
Ozi ndị ọzọ Webụsaịtị mpaghara Hamburg
LF7 River Route, Netherlands na Belgium
Ọ bụ ezie na a na-akpọ nke a osimiri si aga (Okporo ụzọ ọ bụla na Dutch), ọtụtụ n'ime osimiri ndị ahụ ka a na-agbanye ma ọ bụ na-esonye na akụkụ ndị a wara n'akụkụ.
Ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè ga-ahọrọ ịmalite na Amsterdam, n'agbanyeghị LF7 na-amalite n'eziokwu na Alkmaar nke dị n'ebe ugwu.
Site na etiti obodo Amsterdam bara uba ị na-agbaso osimiri Vecht, ọwa mmiri Amsterdam-Rhine na ọwa mmiri Merwede.
Site na Brabant ị bulie ọnụ mmiri osimiri Dommel na Eindhoven Canal.
Akụ mmiri nke osimiri Maas na Albertkanaal Albert Canal mechara kwaga n'obodo mara mma nke Maastricht.
Ọ bụkwa njem site na akụkọ ihe mere eme Dutch na nleta na ụlọ ngosi mmiri 'waterline' nke Dutch, Osimiri Zaan nwere ụlọ akwụkwọ ọdịnala na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na windo ya.
Osimiri Vecht nwere nnukwu ụlọ na ala obodo ewuru na Golden Age site na ndị ahịa bara ọgaranya si Amsterdam dị ka oge ezumike oge ọkọchị.
Bido / mechaa Alkmaar ruo Maastricht
Ogologo kilomita 239 / 385km
E-igwe kwụ otu ebe hire Onwere ihe nlere anya banyere ebe ahia ego na Amsterdam na Holland Cycling
Ozi ndị ọzọ Ihuala weebụ Holland Holland na ibe weebụ yana ibe weebụ Holland
Obodo LF5 Obodo Belwa na Limburg
Dị ka Netherlands, Belgium na-agafe mmiri site na ọwa mmiri na osimiri ndị nwere ọwa mmiri na ụzọ ndị bịanyere aka na ya nke ọma.
Dị ka Netherlands kwa, a na-enwekarị nhọrọ n'etiti ịgbaso ụzọ ọsọ ọsọ kwụ ọtọ ma ọ bụ ịhọrọ n'okporo ụzọ na-eleta obodo na obodo nta na ebe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị.
LF5 na-agafe mpaghara Flanders na Belgium site na iji ọtụtụ ọtụtụ ọwa mmiri na osimiri ndị a na-asọ asọ.
N’akụkụ ụzọ ọ na-aga na ọwa mmiri, okporo ụzọ gbara agba na ụlọ ochie nke World Heritage Site Bruges, Bruges-Ghent ka ọ banye n’ọgba ochie Ghent mgbe ahụ osimiri Scheldt dị ka ọmarịcha ebe ahụ ka ọ na-aga n’ime ime ọwụwa anyanwụ, na -ejikọtara ọnụ ụzọ mmiri pere mpe.
Ọ na-ejedebe n'obodo mara mma nke Thorn, ama ama maka obere ụlọ ndị ọcha ya.
Bido / mechaa Damme ka Thorn
Ogologo kilomita 186 / 300km
E-igwe kwụ otu ebe hire 'Sgbọ ala Ben, Bọr
Ozi ndị ọzọ Ihu weebụ Fietsroute
N’ezie nnukwu usoro nke ọwa mmiri ndị nwere ọwa mmiri na ọtụtụ agwa mara mma site na mpaghara Brittany France, ama ama maka ọdịbendị Celtic dị iche iche, nri (na cider) na asụsụ.
E nwekwara ọtụtụ ụzọ esi arụ ọrụ na ọtụtụ ụzọ Brittany nke Greenway (ihe karịrị 500 kilomita / 800km n'ime ha), ọtụtụ dabere na ụzọ ụgbọ oloko ochie ma na-enye ohere iji kpokọta ụzọ ụgbọ mmiri na-adịghị agwụ agwụ nke ịnya ụgbọ njem iji gaa ebe ndị na-adọrọ mmasị na ọwa mmiri.
Ebe ndị mara mma na ndị mara mma n'ụzọ ahụ gụnyere Pontivy, Josselin, Guérdelan Lake na obodo Nantes mara mma nke ukwuu.
Ọwara bụ akụkụ nke ụzọ Velodyssey toro ogologo nke na-aga ugwu ruo ndịda n'ofe ọdịda anyanwụ France.
Vidio a na-egosi mpaghara ugwu nke okporo ụzọ nwere ọtụtụ akụkụ nke ọwa mmiri:
Bido / gwụchaa Châteaulin ka Nantes
Ogologo okirikiri 228 kilomita / 365 km
E-igwe kwụ otu ebe Breton Bikes, Gouarec
Ozi ndị ọzọ Map ebe a na peeji nke ozi ebe a
Nwekwara ọtụtụ ndị ọzọ Brittany Cycling na akwụkwọ ntuziaka Gigị dị na Northern France
Ticino ụzọ ụzọ Ticino na-agbaso usoro Ticino ma ọtụtụ oge n'ogologo ụzọ ya na-aga n'akụkụ mmiri nke okporo ụzọ Walklio Bereguardo na okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè Naviglio Grande.
Akụkụ nke mbụ nke okporo ụzọ ahụ dị n'okporo ụzọ dị jụụ tupu okporo ụzọ ahọpụtalite Naviglio di Bereguardo. Akụkụ ndịda nke Sesto Calende bụ otu n'ime akụkụ ndị mara mma nke ụzọ ahụ.
Ọ na-akwụsị n'obodo mahadum a na-eme ochie ihe na Pavia, obere njem anyị na-eji ụgbọ ịnyịnya aga bụ Certosa di Pavia, otu n'ime ebe obibi ndị mara mma nke ukwuu na Europe.
Bido / mechaa Sesto Calende na Pavia
Ogologo okirikiri 75 kilomita / 120 km
E-igwe kwụ otu ebe Cicloficina Garibaldi, Pavia
Ozi ndị ọzọ Ntanetị Ntụgharị Cytali na ibe weebụ Varese Tourism
Ozi banyere ọwa mmiri ndị dị na Spen dịchaghị mma, ikekwe n'ihi na ọwa mmiri ndị na-efe efe na-akwụkarị mmiri ọtọ!
A na-ejizi Castilla canal eme ihe ugbu a mana ejiri akwa mmiri maka ihe omume mtb na-eme kwa afọ na ọwa mmiri ahụ na-enye gị ohere imecha na obodo mahadum ochie nke Valladolid na obodo ochie nke Medina de Rio Seco.
Ọ na-agabiga na mbara ọzara nke ebe Tierra de Campos nke dị n'ebe ugwu Spain na ọ bụ ama ama maka anụ ufe nke obodo, gụnyere Great Bustards na ụdị ndị ọzọ na-adịghị ahụkebe.
Bido / gwụchaa Alar del Rey (Palencia) gaa Medina de Rio Seco, na nso Valladolid
Ogologo okirikiri 93 kilomita / 150 km
Ihe omuma ndi ozo Peeji na njegharị na Spanish websaịtị Omume web peeji nke (Spanish naanị)
Ledzọ Caledonian gụnyere Caledonian Canal, Scotland
Nke a bụ ishsọ Okporo ụzọ Scotland gaa Oke Osimiri, mpaghara etiti nke na-eji ọmarịcha ụgbọ ndị caledonia.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka nhọrọ Oban dị mkpụmkpụ karịa, ọ ga-abụ naanị awa atọ na ụgbọ oloko si Glasgow ma na-enweta akụkụ ndị dị egwu enweghị okporo ụzọ, juputara na ụzọ ụgbọ mmiri nke lochs.
Na ugwu ugwu Fort William ị sonye na Caledonian Canal n'ụzọ kwesịrị ekwesị site na iji nhicha mmiri na ụzọ na obere okporo ụzọ ruo mgbe ị na-aga ezigbo ọmarịcha ụzọ karịa Loch Ness n'onwe ya, tupu agba ikpeazụ abanye na Inverness na egwu na obere okporo ụzọ.
Bido / mechaa Campbeltown ruo Inverness
Ogologo okirikiri 237 kilomita / 381 km
E-igwe kwụ otu ebe Nevis okirikiri
Ozi ndị ọzọ Ibe weebụ Sustrans
Gabiga ụfọdụ n’ime obodo Bekee mara mma, yana Georgian Bath na Bradford oge ochie na Avon, egwuregwu ụgbọ oloko Kennet na Avon agbatịwo ma meziwanye maka ndị na-agba ịnyịnya na-agagharị.
Mkpọchi Caen Hill bụ otu n’ime ebe nlele dị egwu na ọdụ ụgbọ mmiri UK niile na Pewsey White Horse (otu n'ime ịnyịnya asatọ na-acha ọcha nke Wiltshire) nwere ike ịhụ na ngalaba ikpeazụ n'ime Ọgụgụ na-eji obere okporo ụzọ na egwu.
Bido / mechaa bat ya gụchaa
Ogologo okirikiri 85 kilomita / 137 km (ịgbatị ọdịda anyanwụ na ezigbo njem iji Bath na Bristol trainpath, na-agbakwunye ụfọdụ kilomita 15 / 24km n'ebe anya)
E-igwe kwụ otu ebe Towfath Trail Center, Bradford na Avon